पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देहीमा सहित आज थपिएका ४३४ संक्रमित मध्ये कुन जिल्लाका कति ? – KhabarKhurak
पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देहीमा सहित आज थपिएका ४३४ संक्रमित मध्ये कुन जिल्लाका कति ?
काठमाडौँ, ११ असार । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४३४ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यससंगैं संक्रमितको नेपालमा कुल संक्रमितकाे संख्या ११ हजार १६२ पुगेकाे प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। नेपालमा कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा २ जनाको मृत्यु समेत भएकाे छ ।
विहिवार थप भएका मध्ये ४८ जना महिला र ३८४ पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको हो ।
आज संक्रमित भएका मध्ये जिल्लागत संक्रमित विवरण यस्तो छ ।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा झापा र सुनसरीका एकएक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी, सप्तरीका ८ र सुनसरीका ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका १ जनामा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जनकपुरमा धनुषाका ९, महोत्तरीका ५ र सिरहाका २ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका १३, बैतडीका १, बझाङका १६, बाजुराका ४, डडेल्धुराका १२, कैलालीका २, कञ्चनपुरका ५९, रौतहटका ३८, सर्लाहीका ५ जनामा समेत कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
यस्तै भरतपुरको प्रयोगशालामा पाल्पाका ९३ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ भने हेटौडा प्रयोगशालामा बाराबा १ जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डोल्पका १, काठमाडौंका ५, ललितपुरका १, सुनसरीका १ र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भक्तपुरका ४ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ।
यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नवलपरासीका ५ र तनहुँका ९ जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको हो।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका २, म्याग्दीका ६ र स्याङ्जाका १ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा नवलपरासीका ३ जना, प्यूठानका ७, पाल्पाका २८, र रुपन्देहीका ७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका १ र बर्दियाका एक जना कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ।
सुर्खेतको प्रयोगशालामा बैतडीका १, बझाङका २, बाजुराक १, दैलेखका १८, दार्चुलाका १, धादिङका १, इलामका १, जुम्लाका १, कैलालीका १, कालीकोटका १, कास्कीका १, लमजुङका १, सल्यानका १ र सुर्खेतका १३ जनामा कोरोना भाइरस पाइएको छ।
यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बैतडीका १, बाजुराका ४, बाँकेका ३, दैलेखका १, दाङका १, धादिङका १, गोरखाका २, गुल्मीका १, इलामका १, जुम्लाका १, कञ्चनपुरका १, खोटाङका १, लमजुङका १, ओखलढुंगाका २, पाल्पाका १ रामेछापका २ र ताप्लेजुङका ३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्।
आज थपिएकासहित नेपालमा संक्रमितको संख्या ११ हजार १ सय ६२ जना पुगेको छ। हालसम्म २ हजार ६ सय ५० जना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार हालसम्म देशका ७६ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। रसुवाबाहेक देशका सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण भएको हो।
म्याग्दीका ठाउँठाउँमा बाढी–पहिरो, ३२ जना बेपत्ता
गुल्मीमा २६५ जनाले जिते कोरोनाः अब आइसोलेसनमा ७९ जना मात्रै
नेपालमा कोरोना संक्रमित दर घट्दै पछिल्लो २४ घन्टामा १०८ जनामा मात्रै पुष्टि
देशैभर धेरैजसो स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षा हुने, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
पाल्पामा शुक्रबार थप ७७ संक्रमित थपिए, जिल्लामा संक्रमितको संख्या ४४६ पुग्यो
कोरोना भाइरस अपडेट : स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार ब्रिफिङ लाइभ हेर्नुहोस
थप ५९३ जनामा कोरोना पुष्टिः नेपालमा संक्रमितको संख्या ११ हजार ७५५ पुग्यो